BunsenLabs ny distro mandimby ny CrunchBang Linux | Avy amin'ny Linux
BunsenLabs ny distro mandimby ny CrunchBang Linux
BunsenLabs Linux dia fizarana Linux tsy miankina ofisialy an'i Debian. Izy io dia heverina ho fitohizan'ny sy mpandimby ny CrunchBang Linux, noforonin'ireo mpikamban'ny vondrom-piarahamonina farany.
Ity fizarana ity manolotra fifandanjana eo amin'ny hafainganam-pandeha sy ny fiasaary koa mpitantana varavarankely Openbox fa tsy tontolon'ny birao.
Ho fanampin'izany, mampiditra fampiasa minimalista sy maoderina miaraka amina endriny avo lenta izy io.
1 Momba ny BunsenLabs Linux
2 Sintomy ny BunsenLabs
Momba ny BunsenLabs Linux
BunsenLabs misy fizarana lozisialy misy zavatra ilaina vitsivitsy fotsiny.
Firefox no mpizaha tranonkala mahazatra, fa azonao atao koa ny mametraka Chromium, Google Chrome na Opera amin'ny tsindry tokana.
ihany koa manana Mpanjifa BitTorrent Transmission, HexChat IRC, Filezilla ary rohy hametrahana ny mpizara OpenSSH.
Raha ny Office no resahina, dia ny mpanoratra fotsiny no apetrakao ivelan'ny LibreOffice suite. Impress, Calc na ny suite manontolo dia azo apetraka, indray mandeha, amin'ny tsindry iray monja.
Misy Gnumeric sy Google Docs azonao alaina, izay heveriko fa milay be.
Ho an'ny sary dia manana ny mpijery sary Mirage ianao ary fampiharana pikantsary napetraka miaraka amin'ny GIMP, Blender, Inkscape ary ny sasany kosa tsindry iray monja.
Ny fizarana Izy io dia misy fonosana fikirakirana sy loharano napetraka ao amin'ny Debian. Tsy misy fiovana amin'ny fomba fitantanana ny rafitry ny Debian base.
Openbox windows manager dia namboarina tamina tontonana tint2 sy maso rafitra conky.
Izy io dia manana lohahevitra, wallpaper ary setroka conky isan-karazany an'ny GTK2 / 3.
Fitaovana fampiharana sy fikirakirana isan-karazany hitazonana ity rafitra ity.
Ny fonosana fanampiny amin'ny desktop, haino aman-jery, ary fitaovana mifandraika amin'ny fitaovana dia efa napetraka mialoha ho an'ny traikefa "ivelan'ny boaty" tsara kokoa.
Conky dia misy ary mihodina amin'ny toerana misy anao ao amin'ny BunsenLabs. Afaka misafidy amin'ireo lohahevitra efa napetraka mialoha izy ireo na hametraka lohahevitra hafa ary hametahana kokoa ny latabany.
Azon'izy ireo atao ihany koa ny mamindra ny tontonana ambony ambony amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny menio item.
Raha manana fahalalana ilaina ianao dia ho fantatrao fa azonao atao ny manova ny Openbox sy ilay mpamoron-kira.
Azonao atao ny misafidy lohahevitra ho an'ny fampandrenesana anao (lohahevitra sy toerana) ary ireo rehetra ireo dia misy amin'ny preferences amin'ny menio tsindrio havanana.
Sintomy ny BunsenLabs
Raha te hanana an'ity kinova vaovao ity distro hametraka amin'ny solosainao ianao na hizaha toetra amin'ny milina virtoaly.
Mila mankany amin'ny tranonkala ofisialin'ny tetikasa ianao ary amin'ny fizarana fampidinana azy dia azonao atao ny mahazo ny rohy amin'ity distro ity. Ny rohy dia ity.
Ny takiana faran'izay kely indrindra ahafahana mihazakazaka BunsenLabs amin'ny solosaina dia 256 MB RAM ary fametrahana miaraka amin'ny habaka disk mihoatra ny 2 GB.
Afaka mampiasa loharano ambany kokoa izy ireo raha tsy mikasa ny hanao birao misy sary miaraka amin'ireo rindranasa mahantra.
BunsenLabs dia misy amina mari-trano 32-bit sy 64-bit.
Misy fananganana 32-bit fanampiny izay tsy mitaky fanohanan'ny PAE amin'ny solosaina CPU ho an'ny masinina tranainy.
Aorian'ny fisintomana ilay rakitra, afaka mandoro ny sary ISO aryn CD / DVD na mandoro azy amin'ny tsora-kazo USB mampiasa fitaovana toa Unetbootin na Etcher avy eo manomboka ny rafitra avy eo.
Aorian'ny fanombohana dia hanana safidy izy ireo hiditra amin'ny tontolo iainana mivantana ary hizaha toetra ny distro na afaka mandroso sy mametraka izy ireo raha azony antoka fa tian'izy ireo hapetraka ao amin'ny solosain'izy ireo izany.
Ny zavatra iray manamarika dia ny tsy azo apetraka avy amin'ny tontolo iainana mivantanaNoho izany, hanatanterahana ity asa ity dia tsy maintsy hamerina ny solo-sain'izy ireo indray izy ireo ary amin'ny menio fanombohana ity dia safidio ny safidy hametrahana ny rafitra amin'ny solosaina.
Raha misafidy ny hametraka ianao dia mahitsy ny fizotrany rehefa mampiasa ny mpiorina tsotra an'i Debian ianao. Angatahina ianao mba hikirakira ireo entana mahazatra toy ny kapila, fiteny ary fitendry, kaonty sy tenimiafin'ny mpampiasa ary teny hafa.
Haharitra minitra vitsy ny fizotrany ary hanana ny fametrahana ny birao ianao ary vonona ny handeha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » BunsenLabs ny distro mandimby ny CrunchBang Linux
Jorge Guerra dia hoy izy:
Efa lany daty io, sa tsy izany?
Valiny tamin'i Jorge Guerra
Lany andro? inona no tianao holazaina, mifototra amin'ny Debian 9 izy io
Ny 09 Rasoloviana vaovao dia misy 10/2018/XNUMX izao
Azo alaina izao ny kinova vaovao an'ny Emmabuntus Debian Edition 2 1.03